Aliexpress ayaa iibineysa XIAOMI Pad 5 oo muddo dheer la sugayay | Androidsis
Aliexpress waxay iibisaa XIAOMI Pad 5 oo muddo dheer la sugayay
Emilio Garcia | | Aaladaha Android, Kiniiniyada Android
Maanta, aaladaha dhex-dhexaadku way tartami karaan, mararka qaarkoodna xitaa way dhaafi karaan, aaladaha heer-sare ah. Tani waa waxa inta badan ku dhaca taleefannada iyo kiniiniyada Xiaomi, oo ah shirkad Shiineys ah oo dukaankeedii ugu horreeyay ka furtay Spain Madrid sanadkii 2017, iyo in afar sano kadib na soo bandhigto Xiaomi Pad 5. Kiniin laga heli karo Aliexpress oo leh qiimo dhimis aadan ka maqnaan doonin.
Ha moogaan dalabka hordhaca ah ee Aliexpress, haciendo halkan guji.
Intaa waxaa sii dheer, waxay leedahay shaashad taabasho 2K + ah oo aad ku raaxaysan doonto taxanaha aad jeceshahay iyo filimada xitaa intaa ka sii badan. Laakiin waxay khalad noqon doontaa inaad u malayso in tani ay tahay waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad siiso adeegsadaha, maxaa yeelay Xiaomi Pad 5 waxaa loogu talagalay inuu na raaco muddo dheer oo dheer.
1 Tilmaamaha Xiaomi Pad 5
1.1 Shaashad shaneemo oo ku dhow
1.2 Afar af -haye oo maalin walba laxanka u dhigi doona laxanka maalintaada
1.3 Nolosha batteriga dheer si aad u illowdo xeedho
1.4 Laba kamaradood si loo abuuro xusuusta ugu fiican
1.5 Kaydinta si aad u kaydiso waxaad rabto
1.6 MIUI, waa mashiinka Xiaomi Pad 5
2 Sida loo helo qiimo dhimis 45 euro Aliexpress?
Tilmaamaha Xiaomi Pad 5
Xiaomi Pad 5 wuu sii xoogaysanayaa. Waxay leedahay astaamo badan oo si dhakhso leh uga duwanaan doona tartamayaasheeda ugu waaweyn, sida kuwa soo socda:
Shaashad shaneemo oo ku dhow
Sidee u fiican tahay inaad aragto midabada dhabta ah, sax? Iyada oo la adeegsanayo Xiaomi Pad 5 waxay noqon doontaa wax lagu farxo in la ciyaaro, la dhex maro internetka ama la daawado Netflix. Waxay taageertaa Dolby Vision, kaas oo bixiya horumar muuqda oo la taaban karo marka la barbar dhigo, tusaale ahaan, HD.
Sidoo kale, muujinta 2K + iyo heerka cabbirka 120Hz, kaliya midabadu uma ekaan doonaan kuwo fiiqan, oo leh dhalaalkooda dabiiciga ah, laakiin khibradda adeegsadaha ayaa sidoo kale noqon doonta mid aad u fiican.
Afar af -haye oo maalin walba laxanka u dhigi doona laxanka maalintaada
Shaashad tayo sare leh ayaa waxtar yar yeelan doonta haddii aan si fiican loo hadlin. Taasi dhib kuma aha kuwa raba inay iibsadaan Xiaomi Pad 5. Kani waa aalad taas Waxay leedahay afar ku -hadla oo soo saara dhawaaqa hareeraha, oo aan lahayn dhawaaqyo la yaab leh ama dhibsanaya.
Waxaa iska leh Dolby ATMOS kaas oo aad ku dhegeysan karto muusig ama ka qaybgeli karto wicitaan fiidyow oo aad dareento sida dhawaaqa kuugu soo qulqulayo.
Nolosha batteriga dheer si aad u illowdo xeedho
Si aad u noqoto mid sax ah, Muusikada waxaa la ciyaari karaa in ka badan shan maalmood, fiidiyowyo in ka badan 16 saacadood, iyo ciyaaro ka badan 10 saacadood. Waxay leedahay batteriga 8720 mAh kaas oo aad illoobi karto inaad ku dallacdo maalin kasta. Uma baahnid!
Ku qaad safar, u isticmaal haddii aad u baahan tahay inaad kulan la yeelato shaqaalahaaga ama saaxiibbadaada. Kiniinkaagu wuxuu diyaar noqon doonaa mar kasta oo ay tahay inaad isticmaasho. Oo haddii ay dhacdo inaad haysato batari hooseeya, ha ka welwelin: waxay leedahay lacag dhakhso ah 33W.
Laba kamaradood si loo abuuro xusuusta ugu fiican
Dhabarka dambe wuxuu leeyahay 13 megapixel sensor iyo 8 MP ee hore, labadaba leh dherer focal ah 2.0. Maxay tani ka dhigan tahay? In aad ku qaadi karto sawirro tayo sare leh, adigoon ka dhigin inay u ekaadaan kuwo tirooyin badan leh ama aan cidhiidhi ahayn.
Intaa waxaa dheer, wax badan ayaad ku keydsan kartaa kaniiniga (gaar ahaan, in ka badan 30 kun), sidaa darteed maahan inaad wax ka walwasho.
Kaydinta si aad u kaydiso waxaad rabto
Ma waxaad ka mid tahay kuwa u baahan gigyo badan oo kaydinta? Xiaomi Pad 5 Waxaa lagu heli karaa laba nooc oo kala duwan: mid leh 128 GB iyo kan kale oo leh 256 GB. Haddii aad weli u baahan tahay wax intaa ka badan, waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad geliso kaarka micro SD.
Laakiin si kastaba ha ahaatee, waxaad isticmaali kartaa kiniinkaaga si aad u badbaadiso daqiiqadaha ugu fiican.
MIUI, waa mashiinka Xiaomi Pad 5
MIUI, nidaamka hawlgalka ee ku saleysan Android, waa kan kuu oggolaanaya inaad si fudud u isticmaasho kiniinka. Waxaad si dhakhso leh u geli doontaa codsiyada, waxaad samayn kartaa daaqado yaryar oo aad laba barnaamij isku mar ku wadato, u kala sooc sida aad jeceshahay, ka saar ama u dami kuwa aan ku danayn ...
Marka la soo koobo, waxaad yeelan doontaa ikhtiyaarro aad ku habayn karto Xiaomi Pad 5 sida aad jeceshahay.
Sida loo helo qiimo dhimis 45 euro Aliexpress?
Kadib wax walba oo aan ka hadalnay Xiaomi Pad 5, waxaa laga yaabaa inaad ka fekereyso inaad iibsato, sax? Hagaag, haddii aad rabto inaad kiniinigaaga ku iibsato qiimo aad u fiican, waa inaad ogaataa in iyadoo la raacayo awoodda kaydinta ay ku kacayso:
128GB: € 254
256GB: € 304
Maxaad sugaysaa si aad u qabato? Adeegso koodhka MIPAD45 oo ha sugin mar dambe, maadaama dalabku uu ansax yahay kaliya 600 -kii iibsade ee ugu horreeyay xidhiidhkan. Degdeg haddii aadan rabin inaad la'aantiis noqoto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Aliexpress waxay iibisaa XIAOMI Pad 5 oo muddo dheer la sugayay
Xiaomi Mi 11T Pro: mobiil awood badan oo qiimo jaban lagu iibiyay
Xiaomi 11T hadda waxaa laga heli karaa dalab bilow ah Aliexpress